TỌRỌ Na Ngwaahịa Mmekọahụ Mmekọahụ Na-enwetakwa Ọsọ Ọsọ
All In-Stock Mmekọahụ Mmekọahụ Dị njikere Readgbọ mmiri Site na United States
Chọgharịa nnukwu anyị na ngwaahịa mmekọahụ dolls. Mee ihe ozugbo na njirimara kacha mma anyị. A na-enyefe ụmụ bebi ndị a n'ime ụbọchị ole na ole!
Ngwaahịa na California.
US nnyefe oge 3 ruo 5 ụbọchị azụmahịa.
100% Enweghị nsogbu.
* Ọnụahịa ụmụ bebi nwoke na nwanyị nwere mmekọahụ na-egosi ebe a bụ ọnụahịa ikpeazụ, enweghị ike itinye ego nkwalite. Dolmụ bebi na-enweta naanị maka iwu USA.
Emmalynn - 165CM Akpụkpọ anụ ndị okenye na -eto eto
Luella - 146CM Nnukwu ara ara Tan Skin Premium YL Real Dolls
Yamileth - 165CM dị warara nnukwu anya na -ebi WM SexyDolls
Aarya - 170CM Nnukwu ara ara akpụkpọ anụ ụmụ bebi na -ejedebe
Rylan - 158cm F-Cup DL Doll Wheat Skin Maka Nnukwu Ebube Mmekọahụ
Elisabeth - 158CM Sexy Beauty Nature Skin Female AXB Love Dolls
Nye iwu maka ịzụ ahịa nwa bebi gị ozugbo - na-echekwa!
"Na-amasị anyị" enwere nwa bebi nwoke na nwanyị "ọ ga-amasị gị ịzụta otu? Mgbe ahụ nye iwu nwa bebi ị chọrọ ozugbo ebe a wee rite uru na azụmaahịa a. Mee ka nwa bebi gị nyefee n'efu ma ọ bụ debe ya ka ọ buru ya, n'ụzọ dị otu a ọ bụ nke gị ịnara.
15 edozi isi dị
Otu-ibe, ntinye ụdị ikpu nhọrọ
Ndabere tan akpụkpọ agba, aja aja-nwa anya, red lipstick, siri ike ara, akpụkpọ agba areola, anụ ahụ na agba ala ahu, ọ dịghị ntutu transplantation, nwere ike iguzo;
Ngwa: Wigs, blanket, uwe ime, combs, mkpara ndị na-ekpo ọkụ, ndị na-ehicha ihe.
Zụta a Mmekọahụ Mmekọahụ Na-amụta - Kporie Ọsọ Mbubata Ọsọ!
Ozugbo anyị zigara gị nwa bebi gị dịnụ, ọ ga-eme n'oge dị mkpirikpi, n'ihi na anyị niile nwere ụmụ bebi dị na ngwaahịa. Ọ bụrụ n ’ị na-eme atụmatụ ịzụ nwa bebi ma ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa, leezie anya! Enwere ike izipu nwa bebi gị ozugbo.
Lee ụmụ bebi nwere ike izipu iwu gị n'oge ọ bụla! Ka anyị niile nọrọ na nchekwa, nọ jụụ, ma nwee okwukwe na ezigbo oge. Nnukwu ngwongwo anyị na-enye ndị ahịa anyị ọtụtụ nhọrọ site na ụmụ bebi ndị bụ isi na ntinye nka. Obi dị anyị ụtọ ịkpọ gị ka ị bịa na ụlọ ahịa anyị. Jiri ụgbọ ala anyị nwere nchebe zụrụ ahịa na ntụkwasị obi na nchekwa.